नेकपाको जनवर्गीय संगठन नेतृत्वमा कसले बाजी मार्ला ? «
नेकपाको जनवर्गीय संगठन नेतृत्वमा कसले बाजी मार्ला ?
प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०७५, सोमबार १६:३९
नेकपाको जनवर्गीय संगठनको नेततृत्का लागि तीब्र संघर्ष देखिएका छन् । नेकपा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएपनि तलका संगठनहरुको एकीकरण भएको छैन । तसर्थ, दुवै दलका जनवर्गीय संगठहरुबीच एकता गर्दै नेतृत्व छान्न अहिले सकस भइरहेको छ । संगठनका कार्यदल बनाइएपनि कुनै सहमति जुटाउन नसकेपछि केन्द्रले नै टुंगो लगाउने गरी काम अघि बढाइएको देखिन्छ । यसरी संगठनहरुमा नेतृत्व लिन नेताहरुबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।
अनेरास्ववियुको संयोजकका लागि ९ जना नेताहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । संघीय संसदको सांसद नविना लामा भने प्रतिस्पर्धा नगर्ने मुडमा छन् । तत्कालिन माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ पनि एकीकृत विद्यार्थी संगठनको संयोजक लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।
युवा संगठनको अध्यक्षमा रमेश पौडेल र रामप्रसाद सापकोटा दौडमा छन् । तर रमेश पौडेल आफुले नै जित्नेमा ढुक्क छन् ।
मजदुर संगनमा एमाले निकट विनोद श्रेष्ठ र माअ‍ेवादी निकट गणेश रेग्मी दुवैको दावी छ ।
महिला नेतृत्वमा पनि एमालेका राधा ज्ञावाली, सीता पौडेल, गोमा देवकोटा र माओवादीका उर्मिला अर्याल र अमृता थापामगरबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।
प्रेस संगठन नेपालको संयोजकका लागि पनि ७ जनाको दावी देखिन्छ । यसमा प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपालका नेता गगन विष्ट, गणेश वस्नेत, माधव नेपाल तथा महेश्वर दाहाल, बलराम थापा, ओम शर्मा र विष्णु सापकोटा रहेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ संयोजकमा बामदेव गौतम, प्रेम दंगाल, हरिबोल गजुरेल र चित्रबहादुर श्रेष्ठको सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल दलित मुक्ति संगठनको संयोजकका लागि तिन जनाको दावी छ ।
नेपाल बुद्धिजीवी संघ
नेपाल बुद्धिजीवी संघमा पनि प्रा.डा गणेशमान गुरुङ र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा दौडमा छन् ।
जनसांस्कृतिक महासंघमा खगेन्द्र राई र सरल सहयात्रीको दाबी देखिन्छ ।
मुस्लिम मोर्चामा सराज अहमत फारुखी र अतहर हुसेनले दावी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय पेसागत महासंघ
राष्ट्रिय पेसागत महासंघमा विश्वनाथ प्याकुरेल र प्रेमल खनालको दाबी छ ।
मानवअधिकार तथा सामाजिक अभियान
मानवअधिकार तथा सामाजिक अभियान नेपालको संयोजकमा मीनबहादुर शाही र हुकुम पोखरेलमध्ये एकको सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी संगठन
नेपाल कानुन व्यवसायी संगठनमा रुद्र नेपाल र दीनमणि पोखरेलको नाम अगाडी छ । र, प्र्रोग्रसिभ इन्जिनियरिङ एसोसियसन नेपालको संयोजकमा शम्भुबहादुर श्रेष्ठ र हरि पराजुलीको सम्भावना छ ।